empeleni ayibibi kakhulu kunezinye izixuku zokuxubha? empeleni ayibibi kakhulu kunezinye izixuku zokuxubha?
empeleni ayibibi kakhulu kunezinye izixuku zokuxubha, empeleni ayibibi kakhulu kunezinye izixuku zokuxubha
IMILOMO ENGCONO KAKHULU YEMPILO YAKHO NGOMLOMO
Kunokuhlanza umlomo okuningi okutholakalayo ukukhethwa, ngakho-ke ukuhlela okukulungele kakhulu kungaba nzima kancane. IDOMY igxile ocwaningweni nasekuthuthukiseni i-mouthwash yezempilo yamazinyo. Sifunde imisebenzi ethile, njengokuqamba okusebenzayo nokungasebenzi, futhi ukunambitha, njll. Ungayikhetha kanjani i-mouthwash? Kunezimbili…
KUNIKE NGE-TOOTHPASTE ENGCONO KAKHULU: IZINDLU
Lapho uzothenga umuthi wokuxubha, uzoba nezinqumo eziningi. Kungaba umqondo omuhle yini ukuthi ukhethe eyodwa ehlanza i-tartar? Ukukhetha eyodwa equkethe i-Fluoride? Kokubili? Futhi, khumbula ukucabangela okokugcoba okwenziwa mhlophe noma amafomula emvelo. Mayelana nokukhetha okuhle…
Ikhasi 1 ye 1 1